मोबाइलको टर्चका भरमा सुत्केरी गराउनुपर्ने बाध्यता, छाउगोठमा एककाे मृत्यु
डोल्पा : डोल्पाको एक प्रसूति केन्द्रलाई मोबाइल टर्चको भरमा सुत्केरी गराउनुपर्ने बाध्यता छ। भरपर्दो बत्तीको सुविधा नहुँदा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका-१ मा पर्ने त्रिपुराकोट प्रसूति केन्द्रमा मोबाइल टर्चको भरमा सुत्केरी गराउनु परेको हो। गत साउनयता मात्रै १६ जना सुत्केरीको मोबाइलको टर्च बालेर सुत्केरी गराएको स्वास्थकर्मीहरुले जानकारी दिएका छन्। ग्रामीण भेगका महिलाहरुलाई सफल सुत्केरी गराउने उद्येश्यका साथ स्थापना गरिएको प्रसूति केन्द्रमा भरपर्दो बत्तीको व्‍यवस्था नहुँदा समस्या हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। सुत्केरी गराउने जस्तो जटिल कामका लागि उज्यालो र न्यानो ठाउँ आवाश्यक पर्ने भए तापनि त्रिपुराकोट स्वास्थ चौकीमा भएको सोलार पनि बिग्रेपछि मोबाइलको धिपधिपे उज्यालोले गराउनुपर्ने बाध्यता छ। स्वास्थ चौकीमा भरपर्दो बत्ती नहुँदा स्वास्थकर्मीको मोबाइलको टर्च र घरबाट ल्याएको ब्याट्रीलाग्ने टर्चको भरमा सुत्केरी गराउनुपर्ने समस्या देखिएको सुत्केरी हुन आउनेहरूका आफन्तले गुनासो गरे। 'घरमै सुत्केरी हुन असुरक्षित हुने भएकाले प्रसूति केन्द्रमा महिलाहरू सुत्केरी हुन आउँछन् तर अस्पताल नै बत्ती नहुँदा म आफैँ मोबाइल टर्चको भरमा सुत्केरी भए' त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका वडा नं २ रुमकी नरचन्दा थापाले भनिन्। एकसाता अघि मात्रै स्वास्‍थ्‍यकर्मीको मोबाइलको टर्चको भरमा सुत्केरी भएकी थापाको मृत बच्चा जन्मिएको थियो। थापाजस्तै दर्जनौँ सुत्केरी महिला र उनीहरुका आफन्तले स्वास्थ चौकीमा बत्तीको भरपर्दो व्‍यवस्था र तालिमप्राप्त स्वास्थकर्मी राख्न माग गरेका छन्। गत साउनदेखि स्वास्थ चौकीको सोलार बिग्रेकाले यसरी नै सुत्केरी गराउँदै आएको स्वास्थ चौकीका प्रमुख तुलबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए। '१६ जनालाई मोबाइल टर्चकै भरमा सुत्केरी गराइसक्यौँ,तर बिग्रेको सोलार मर्मतका लागि कसैको ध्यान गएको छैन' उनले भने।
दुई वर्षको ग्यारेन्टी दिँदै स्वच्छता परियोजनाले जोडेको सोलार एकवर्ष नपुग्दै बिग्रेपछि स्थानीयले परियोजनामाथि नै प्रश्न गरेका छन्। त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको म्याचिङ फन्टमा उक्त संस्थाले रकम थप गरेर अनुदानमा दिएको सोलार ग्यारेन्टी दिएको समयअगावै बिग्रेपछि स्थानीयले कमसल सोलार जडान गरेको आरोप लगाएका हुन्। दुई किलोवाट क्षमताको सोलार एक्कासि आफैँ बिग्रेपछि सुत्केरी गराउन ठूलो समस्या भएको बताउँदै मर्मतका लागि परियोजनाका मान्छेलाई धेरै पटक खबर गरे पनि सुनुवाइ नगरेको स्वास्थकर्मीले बताए। दुर्गमका स्वास्थ चौकीमा बत्तीबिना उपचारमा हुने समस्यालाई मध्येनजर राख्दै लाखौँको सोलार सहयोग गरेकाले मर्मतका लागि संस्थाको तर्फबाट ताकेता गरिरहे पनि सुनुवाइ नभएको बताए।
नगरपालिकाको केन्द्रमा पर्ने स्वास्थ चौकीमा तालिमप्राप्त स्वास्थकर्मी नहुँदा सुत्केरी गराउन समस्या छ। जिल्लाकै केन्द्रबिन्दुमा रहेको स्वास्थ चौकीमा दक्ष अनमी नहुँदा सुत्केरीसम्बन्धी तालिम नलिएका करारका कर्मचारीले सुत्केरी गराउनुपर्ने बाध्यता छ। सुत्केरी गराउनकालागि छुट्टै प्रसूतिसम्बन्धी तालिम लिएको अनमी आवाश्यक पर्छ। प्रसूति केन्द्र सञ्चालन गरिएका प्रत्येक स्वास्थ चौकीमा एकजना एसबीआई तालिमप्राप्त अनमी अनिवार्य हुनुपर्छ। स्वास्थ चौकीमा गत साउनदेखि तालिम नलिएका अनमीले सुत्केरी गराउँदै आएको बताउँदै नगरपालिकाले करारमा भएपनि तालिमप्राप्त अनमी भर्ना गर्नुपर्ने स्वास्थ चौकीका प्रमुख तुलबहादुर श्रेष्ठले बताए। दुई जना स्थायी अनमीको दरबन्दी रहेको स्वास्थ्‍य चौकीमा हाल एकजना करार अनमी र एकजना मासिका मात्र कार्यरत छन्। समायोजनबाट खटिसके पनि एकजना स्थायी अनमी अझै कार्यालयमा उपस्थित नभएको स्वास्थ चौकीले जनाएको छ। त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा रहेका लिकु,पहाडा,सुँ र त्रिपुराकोट सहितका पाँचवटा स्वास्थ चौकीमध्ये चारवटा स्वास्थ चौकीमा प्रसूति केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ भने फुल्चिङ् स्वास्थ चौकीमा आवाश्यक उपकरणहरु पठाइए पनि सञ्चालनमा आएको छैन। थाहा खबर
याे पनि पढ्नुहाेस् - २१ वर्षीया पार्वतीको छाउगोठमा मृत्यु
सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाममा छाउगोठमा गए राति एक युवतीको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामले दिएको जानकारीअनुसार साँफेबगर नगरपालिका–३ सिद्धेश्वरकी २१ वर्षीया पार्वती रावतको मृत्यु भएको हो ।घटनाबारे अनुसन्धानका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय साँफेबगरबाट प्रहरी टोली त्यसतर्फ खटिएको अछाम प्रहरीले जनाएको छ । घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी छ । अछाममा अहिलेसम्म छाउगोमै १४ महिलाको मृत्यु भइसकेको छ ।
(अङ्ग्रेजी: Menstruation) महिलाको गर्भाशयको भित्री अस्तर रगत र ऊतक योनीबाट निष्कासन हुने प्रक्रिया हो ।साधारणतया महिनावारी १२ देखि १५ वर्षको उमेरमा सुरू हुन्छ; कसैमा आठ वर्ष देखि नै महिनावारीको लक्षण देखिने गर्दछ जुन साधरण मानिन्छ । महिनावारीको अन्तर लगभग २८ दिन हुने गर्दछ । महिनावारी महिला ४५ देखि ५५ भित्रमा सकिन्छ । महिनावारी भनेको शारीरिक परिवर्तनमध्येको एक परिवर्तन हो । यो हाम्रो शरीरमा भएका रागरसहरू (Hormones) को मात्रामा आउने परिवर्तनका कारणले हुने गर्दछ । महिनावारी प्राकृतिक सरसफाइ प्रक्रिया हो र महिनावारी हुनु भनेको एउटी केटी हरेक महिना गर्भवती हुन तयार हुने सङ्केत हो । यदि महिला महिनावारी भइन् भने पाठेघरले बनाएको रगतको तह विस्तारै योनिमार्ग हुदै रगतका रूपमा शरीरबाट बाहिर निस्कन्छ जुन रगतको रङ्ग गाढा रातो हुन्छ र कहिले कही ढिका जस्तो भएर जमेको रगतका रूपमा पनि बाहिर निस्कन्छ ।
महिनावारी सुरू हुने उमेर
पहिलो पटक महिनावारी सुरु हुने उमेर, प्रत्येक महिनाको महिनावारीबिचको अन्तर र महिनावारी बन्द हुने समय प्रत्येक महिलामा फरक फरक हुन्छ । धेरैजसो युवतीहरूमा पहिलो महिनावारी १२ देखि १४ वर्षको उमेरमा हुन्छ तर कुनै कुनै युवतीहरूमा छिटो ९ वर्षको उमेरमा नै र कुनै कुनैमा ढिलो १६ वर्षको उमेरमा महिनावारी भएको पनि पाइएको छ । यदि कुनै युवतीको पहिलो महिनावारी १६ वर्षमा मात्र भएको छ भने पनि यसलाई सामान्य नै मान्न सकिन्छ तर यदि महिनावारी हुनु पर्ने सामान्य वर्षभन्दा ढिला भएमा डाक्टर वा स्वास्थ्यकर्मीसंग सल्लाह सुझाब सहित उपचार सेवा लिन सकिन्छ ।
महिनावारीको समयमा हुने परिवर्तन
महिलाको योनि बाट पटक रगत आउने, प्रायः पहिलो र दोस्रो दिनमा बढी रगत बग्छ ।
धेरै युवतीहरूमा पहिलो पटक महिनावारी हुँदा, पहिलो वर्षमा महिनावारी अनियमित हुन्छ (केही महिनाका लागि महिनावारी रोकिनु वा अर्को महिनावारी हुने समय लम्बिनु।
नियमित महिनावारी भएमा रगत आउने औसत समय करिब ५ वा
७ दिनसम्मको हुन्छ ।
धेरै केटीहरूको महिनावारी सुरु हुनु ठिक अघि र महिनावारी भएकै वेलाको पहिलो दिन अलि बढी तल्लो पेट दुख्छ ।
महिनावारी सुरु हुनु करिब १२ देखि १६ दिनअघि डिम्बाशयबाट एउटा डिम्ब निस्कन्छ । यसलाई अङ्ग्रजीमा ovulation भनिन्छ । महिलालाको डिम्बाशयमा धेरै डिम्बहरू रहेका हुन्छन् र उक्त डिम्ब उत्पादनको क्रममा केही महिलालाई पेटको वरिपरि दुखेको अनुभव हुन्छ ।
महिनावारी र प्रजनन
महिनावारीको एक पुरा चक्र औसतमा २८ दिनको हुन्छ । एक पटकको महिनावारीबाट अर्को पटकको महिनावारी हुने समय कसैमा लामो त कसैमा छोटो हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा तपाईंले चिन्ता लिनु पर्दैन किनकि त्यसलाई सामान्य नै मानिन्छ । त्यसै गरी तपाईंको महिनावारी २१ दिन वा ३५ दिनमा भए पनि त्यसलाई सामान्य नै मान्न सकिन्छ ।
हरेक महिना परिपक्व डिम्ब डिम्बाशयबाट निस्केर डिम्ब बाहिनी नली हुदै पाठेघरसम्म आउछ । उक्त समयमा असुरक्षित यौन सम्पर्क भएमा र योनिभित्र नै वीर्य खसालेमा डिम्बलाई शुक्रकीटले निषेचित गर्न सक्छ र निषेचित भएमा महिला गर्भवती हुन्छिन् । यदि डिम्बको शुक्रकीटसंग मिलन भएन भने बच्चा हुर्काउनका लागि पाठेघरमा बन्दै गइरहेको उपयुक्त वातावरण प्रक्रिया आवश्यक पर्ने रागरसहरू (Hormones) को वृद्धि जसका कारणले पाठेघरको भित्तामा बनिरहेको रगतको तह रोकिन्छ र नियमित महिनावारी प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
महिनावारी करिब ४५ वर्षको उमेरसम्म रहन्छ । यही उमेरका हाराहारीमा महिलाको महिनावारी रोकिन सुरु हुन थाल्छ र त्यसपछि महिला गर्भवती हुन सक्दिनन् ।
महिनावारी र सरसफाई
महिनावारी हुँदा शारीरिक सरसफाईमा विषेश ध्यान पु-याउनु पर्ने हुन्छ । ग्रामीण महिला महिनावारी हुँदा फोहोर कपडा प्रयोग गर्ने गर्छन् । यसले गर्दा उनीहरुको गुप्तांगमा संक्रमणको समस्या बढी देखिन्छ । गुप्तांगमा भएको संक्रमणले पछि गएर शरीरको प्रजनन् अंगमा पनि संक्रमण हुने सम्भावना हुन्छ । नेपालको पश्चिमी भेगतिर महिलाहरुले अवस्था अझ नाजुक छ । उनीहरू महिनावारी हुँदा कुनै पनि कपडा प्रयोग गर्देनन् । कसै-कसैले कपडा प्रयोग गरेभने पनि सूर्यलाई देखाउनु हुँदैन भन्ने अन्धविश्वास छ । यसैले उनीहरू कपडा घाममा सुकाउँदैनन् र अँध्यारो मै राख्छन् । उनीहरू फेरि अर्काेपल्ट महिनावारी हुँदा त्यही कपडाको प्रयोग गर्छन् । यसले गर्दा उनीहरुको शरीरका भित्री अंगमा संक्रमण हुने संभावना बढी हुन्छ । महिनावारीमा प्रयोग गरेको कपडा घाममा सुकाउनु पर्छ । यसले कपडा मा भएको परजीवि नाष्ट हुन्छ । कपडा नरम र सुतीको हुनुपर्छ । नाइलन र पोलिस्टरको कपडा प्रयोग गर्नुहुँदैन । महिनावारी हुँदा प्रयोग गरिएका कपडा फेरिरहनु पर्छ । रगत लागेको कपडा प्रयोग गर्नुहुँदैन । यसले शरीर गन्हाउने, काछमा घाउ आउने र संक्रमण हुने हुन्छ ।
आजकल महिलाहरु आधुनिक स्यानिटरी प्याड प्रयोग गर्छन् । औषधि पसलबाट रुवा किनेर ल्याउने, यसलाई सानो भागमा बाँड्ने र तिनलाई सुतीको कपडामा बेरेर प्याड बनाउन सकिन्छ । यो प्याड एकपल्ट प्रयोग गरिसकेकपछि कागजमा बेरेर सुरक्षित ठाँउमा फ्याक्ने वा जलाएर नष्ट गर्नुपर्छ ।
असुरक्षित यौन सम्पर्कमा संलग्न हुँदा गर्भवती भएको हुन सक्छ । जसको कारण महिनावारी रोकिएको हुन सक्छ । त्यसकारण त्यस्तो अवस्थामा नजिकैको औषधी पसल तथा स्वास्थ्य संस्थामा गई सामान्य गर्भवती जाँच गराउन सक्नु हुन्छ । महिलाहरूको शरीर संवेदनशील हुने हुदा धेरै चिन्ता, तनाब वा धेरै भ्रमण गर्नु पर्ने अवस्थामा तथा धेरै बिरामी भएमा पनि महिनावारी केही हप्ता अगाडि पछाडि हुन सक्छ । प्रायशः केटी महिलाहरूमा नियमित (कसैको एक हप्ता अगाडि त कसैको एक हप्ता पछाडि) महिनावारी हुन्छ नै भन्ने छैन। त्यसैले आफू कुन मितिमा महिनावारी भइयो भनेर थाहा पाइ राख्न र महिनावारी किन भएन भनी चिन्तामा बस्न नपरोस् भन्ने हेतुले आफ्नो महिनावारीको मिति क्यालेन्डरमा वा डायरीमा लेखि राख्नु राम्रो हुन्छ ।
महिनावारी हुदा तल्लो पेट र ढाड दुख्ने
महिनावारी हुँदा तल्लो पेट र ढाड दुख्नु सामान्य नै मानिन्छ । महिनावारी हुनुभन्दा केही दिन पहिले शरीरमा भएको रागरस (Hormones) को मात्रामा परिवर्तन आउने गर्दछ । यस्तो रागरसको सहयोगले बच्चा हुर्कनका लागि पाठेघरको भित्र उपयुक्त वातावरण बनिरहेको हुन्छ । यस प्रक्रियाका कारणले पनि तल्लो पेट र ढाड दुख्ने गर्दछ । यदि पाठेघरले निषेचित डिम्ब प्राप्त गरेन भने त्यो निर्माण भएको रगतको तह विस्तारै रगतका रूपमा योनिमार्ग हुदै बाहिर निस्कन्छ र यस बेला पाठेघर खुम्चिने र फुक्ने हुदा यस्तो प्रकारको दुखाइ हुने गर्दछ । यही रागरसको (Hormones) परिवर्तनले गर्दा महिनावारी हुनुअघि कब्जियत हुने, स्तन कडा हुने अनि दुख्ने र थकाइ लाग्ने तथा कसै कसैलाई डन्डीफोर आउने जस्ता लक्षणहरू पनि देखा पर्दछन् ।
पेट र ढाड दुख्ने समस्याको उपचार
घरेलु तरिका अपनाएर महिनावारी हुदा पेट दुख्ने समस्यालाई समाधान गर्न सक्छौ । रुमाल वा आधा मिटर जति सुतीको कपडाको टुक्रालाई तातो पानीमा भिजाएर र पेटको वरिपरि सेकाउन सकिन्छ । त्यसै गरी तातो पानीलाई रबडको थैली (Hot bag) मा राखेर दुखेका ठाउमा विस्तारै सेक्न पनि सकिन्छ । रबडको थैली नभएका खण्डमा सिसी (Bottle) मा तातो पानी राखी दुखेका ठाउमा सेक्न सकिन्छ । त्यसै गरी दुखेका ठाउमा विस्तारै हलुका मालिस गर्नाले पनि दुखाइ कम हुन्छ । यस्तो बेला जति सक्दो तातो पानी, चिया र सुपका साथै अन्य गेडागुडीको झोल, हरियो सागसब्जी खानु पर्छ जसले शरीरलाई कमजोर हुन दिदैन । हलुका व्यायाम गर्नाले पनि दुखाइ कम हुन्छ । धेरै रगत बगेमा र सहन नसक्ने गरी पेट दुखेमा स्वास्थ्य चौकी जान ढिलाइ गर्नु हुदैन । माथि उल्लिखित लक्षणहरू महिनावारी हुने बेला देखिनु सामान्य नै हो । त्यसैले चिन्ता गर्नु वा डराउनु पर्दैन ।
महिनावारी हुदाँ यौन सम्पर्क
महिनावारी हुदा यौन सम्पर्क राख्ने नराख्ने भन्ने कुरा व्यक्तिको इच्छा र निर्णयमा भर पर्छ तर वैज्ञानिक रूपले महिनावारी हुदा यौन सम्पर्क राख्नु सुरक्षित छ र यो कुनै फोहोर चिज पनि होइन । एक स्वस्थ केटी / महिला संग महिनावारी भएको बेला यौन सम्पर्क राख्नाले लिङ्गमा कुनै प्रकारको सङ्क्रमण वा एलर्जी हुदैन भने महिलाको पाठेघर वा अन्य यौन अङ्गलाई पनि कुनै असर पर्दैन । तर महिलालाई एच.आई.भी. तथा यौनजन्य सङ्क्रमण भएको छ भने उसको यौन साथीलाई एच.आई.भी. तथा यौनजन्य सङ्क्रमण हुने सम्भावना भने यति वेला अन्य सामान्य अवस्थामा भन्दा धेरै हुन्छ । महिनावारीको वेला असुरक्षित यौन सम्पर्क (परिवारनियोजनका साधन प्रयोग नगरी) गरेमा गर्भ रहने सम्भावना धेरै कम हुन्छ किनकि डिम्ब निस्केर शुक्रकीटसंग भेट नभएपछि डिम्ब मात्र पाठेघरमा आउछ र त्यति वेला बाक्लो भइ रहेको पाठेघरको भित्री तहको पनि काम हुदैन । सोही कारण डिम्ब सहित त्यो बाक्लिएको तह रगतका रूपमा बाहिर आउछ । त्यही नै महिनावारी हो । त्यसैले यति वेला शुक्रकीटको मिलन डिम्बसंग नहुने हुनाले गर्भ रहने कुरै हुदैन । तर यदि कसैको महिनावारी छिटो छिटो जस्तै; २० दिनमा नै हुन्छ भने महिनावारी भएको ४ - ५ दिनमा यौन सम्पर्क राख्नाले महिला गर्भवती हुन सक्छे । त्यसैले आफू सुरक्षित हुनका लागि सधै कन्डमको प्रयोग गर्नु निकै आवश्यक छ । यसले गर्भनिरोधकको काम गर्नाका साथै यौनजन्य रोगहरू सर्नबाट पनि जोगाउछ ।
समाजमा प्रचलित धेरै अन्धविश्वासका कारणले गर्दा महिनावारी भएको महिला र महिनावारीको बेलामा बग्ने रगत अशुद्घ भनिएको देखिन्छ । थुप्रै बन्देज एंव निषेध गर्ने व्यवहारहरु संसार भर मानिसहरुले गर्ने गरेका छन् । यस्ता व्यवहार महिनावारीको वास्तविक एवम् ठिक कारण थाहा नभएर विभिन्न काल्पनिक कुराहरुमा विश्वास गरी गर्ने गरेको देखिन्छ ।